Guddoomiye Cumar Filish oo magacaabay guddoomiyaal degmo -News and information about Somalia
Home Warkii Guddoomiye Cumar Filish oo magacaabay guddoomiyaal degmo
Guddoomiye Cumar Filish oo magacaabay guddoomiyaal degmo
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa maanta magacaabay labo guddoomiye degmo iyo hal ku xigeen.
Wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiye Cumar Filish ayaa waxaa xilkaasi loo kala magacaabay:
Guddoomiyaha degmada Waaberi ayaa loo magacaabay Cabdicasiis Cismaan Jaamac.
Guddoomiyaha degmada Shangaani ayaa loo magacaabay Aweys Sheekh Maxamed Amiin.
Halka guddoomiye ku-xigeenka arimaha bulshada ee degmada Wadajir loo magacaabay Axmed Maxamud Diiriye.
Waxaa xusid mudan in guddomiyaashii hore ee degmooyinkaas lagu dilay qarax lagu sheegay is miidaamin oo 24-kii bishii July ee sanadkan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar, kaas oo ay ku dhinteen Allaha u naxariistee guddoomiyihii gobolka Cabdiraxmaan Yariisow, guddoomiyaal degmo iyo agaasimayaal.
Previous articleCiidamada xoogga oo xubno Al-Shabaab ah ku dilay Gedo.
Next articleKhilaaf sababay in ciidanka PSF-ta Puntland ay soo baneeyaan furimaha dagaalka
KASHIFAAD: Murashax Qoor-Qoor oo dhabarka Ka wareemay Odawaa & Guutaale